नेपाली झण्डा समाउँदै म्याराडोनाले भने: मैले अर्जेन्टिनापछि पहिलोपटक अर्को देशको झण्डा समाते - छापा खबर - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
नेपाली झण्डा समाउँदै म्याराडोनाले भने: मैले अर्जेन्टिनापछि पहिलोपटक अर्को देशको झण्डा समाते
म्याराडोनासँग नेपाली झन्डासहित फोटो खिचाउँदै केसी
सन् १९९९ मा अर्जेन्टेनी लिजेन्ड डियगो म्याराडोनाका समर्थक ललितपुर इमाडोलका सुरेश केसी उनलार्इ भेट्ने अाशा र कामको सिलसिलामा अर्जेन्टिना पुगेका थिए।
सुरुअाती दिनहरुमा केसीले त्यहाँको रेस्टुँरामा काम गरे। सोही क्रममा उनको चिनजान एकजना स्थानिय क्लबका अध्यक्षसँग भयो। जसलार्इ उनले नेपालमा अर्जेन्टिना र म्याराडोनाका समर्थकहरु धेरै भएको बताएका थिए। केही समयपछि सोही अध्यक्ष मार्फत एउटा खेलको क्याटरिङको जिम्मा उनले पाए।
२००२ मा उनले क्याटरिङको जिम्मा पाएको खेल हेर्न म्याराडोनापनि अाउने भएपछि उनले अाफ्ना अार्दश खेलाडीलार्इ भेट्ने अवसर पाएको खबर नेपाल म्यागेजिनमा गोकर्ण गौतमले लेखेका छन्। अन्यले जस्तै म्याराडोनाले कहाबाट अाएको भनेर सोधे? केसीले भने, 'म माउन्ट एभरेष्टको देशबाट हो।'
नेपालबारे पूरै बेखबर म्याराडोनाले प्रतिप्रश्न गरे, म्याउन्ट एभरेष्ट त इन्डियामा पर्दैन र? जवाफमा केसीले एभरेष्ट र बुद्ध जन्मस्थल नेपालमा पर्नेबारे उनलार्इ बताए।
पहिलो भेटमा म्याराडोनासँग सामान्य कुराकानीमात्रै गरेका केसीले पुन: २०१५ मा म्याराडोनालार्इ दोस्रोपटक भेट्ने अवसर पाए। यसपटक पनि संयोग क्याटरिङले जुराएको थियो। अर्जेन्टिनी फुटबल एसोसियसनमा तनाव भएपछि त्यसबारे डाकिएको बैठकको क्याटरिङको जिम्मा केसीले पाएका थिए।
यसपटक भने केसी नेपालको झन्डा बोकेर तस्बिर खिचाउने उदेश्यले पुगेका थिए। म्याराडोनालार्इ भेटनासाथ केसीले नेपाली झन्डामा हस्ताक्षर गर्न अनुरोध गरे। म्याराडोनाको जवाफ थियो, 'राष्ट्रिय झन्डा देशको प्रतिक हो। त्यसैले साइन गरेर यसको अपमान गर्दिन। बरु हातले उठाउँछु।'
अनि दुबै जनाले झन्डा उठाएर तस्बिर खिचे। त्यसपछि म्याराडोनाले भने, 'मैले अर्जेन्टिनापछि पहिलोपटक हो अन्य देशको झन्डा समातेको। तर, म खुशी छु।' सँगै उनले नेपाललार्इ विश्वकप खेल्न शुभकामना दिए।
प्रकाशित १० असार २०७५, आइतबार | 2018-06-24 12:31:42